Blog Reader: [KhunMoung ' s] 25 New Entries: Anthropological introduction to YouTube
[KhunMoung ' s] 25 New Entries: Anthropological introduction to YouTube
Posting from mail
Test posting from mail to blogger
နာဂစ်သွားမယ် စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ လိုက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ သူတွေတော့ စိတ်ဆိုးမှာပဲ။ နာဂစ်ကို မသွားဖြစ်ပေမယ့် လေဘေးကို မသွားဖြစ်ပေမယ့် ရေဘေးစောင့်ကြည့်ရေးတော့ သွားလိုက်ရတယ်။ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းပါးမှာ ရေတက်တာကို ဌာနဆိုင်ရာတွေ သွားရတယ်လေ။ ရေဘေးစောင့်ကြည့်ရေး မြစ်ကမ်းပါး တာတမံ မပြိုအောင် ကာကွယ်ရေး အတွက် အဲဒါတွေ သွားလုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော်က အခုမုံရွာမှာ။ မုံရွာမှာ မိုးမရွာပေမယ့် အထက်ဘက် ခန္တီးမိုး များတာကြောင့် မြစ်ရေလျှံတာကိုး။ ပျော်ပျော်ကြီးပဲ။ ငါးရက်လောက်ကြာသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို သတိရပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Currently Enjoying Song
Janice Vidal - Never Let You Go
အမ်ပီသရီးဖိုင်ပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
Nargis Fake Fotos
နာဂစ်အကြောင်းပြုပြီး ဆူနာမီတုန်းက ဓာတ်ပုံတွေကို အီးမေးလ်တွေကနေ အပြန်အလှန်ပို့နေကြတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီလည်း ပုံတွေရောက်လာတယ်။ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံက မဟုတ်မှန်းသိသာတယ်။ ပို့တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ်တိုင်အသုံးမကျမှန်း ကြေငြာနေသလိုပဲ။ နာဂစ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ပို့နေတယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဘာအတွက်မှ အထောက်အကူမပြုပါဘူး။ ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ရောလွှတ်နေကြတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ ဆူနာမီတုန်းက ပုံတွေကို နာဂစ်ဆိုပြီး ပို့နေကြလည်း မသိဘူး။ တစ်ယောက်ပို့တာကို နောက်တစ်ယောက်က ထပ်ပြီး Forward ထပ်လုပ်နေကြတယ်။ ထပ်ပြောရရင် ဘာအတွက်မှ အထောက်အကူ မပြုပါဘူး။
Microsoft က Windows Vista အတွက် Service Pack ကို 18/4/2008 ကတည်းက Windows Automatic Update ကနေတဆင့် update လုပ်ဖို့ publish ကြိုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အများစု သုံးစွဲနေဆဲဖြစ်တဲ့ XP အတွက် third Service Pack ကို June 10, 2008 မှ ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ် Standalone အနေနဲ့ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ Download Links တွေကို Ghacks မှာ စုစည်းဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Vista မှာပဲ ငြိတွယ်နေပြီမို့ XP မသုံးတော့ဘူး။ Vista နဲ့ Ubuntu 8.04 နဲ့ပဲ သုံးပါးသွားနေတယ်။
Eng Language တွေအတွက် XP SP3 Download Links တွေပါ။
Windows XP SP3 English EXE
Windows XP SP3 English ISO
တခြား languages တွေ အတွက်ကတော့ standalone-windows-xp-sp3-download-list မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
XP SP3 ရဲ့ Road Map ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းလို့ သိရပါတယ်။
Refilling Printer Ink
Refill Printer Cartridge For $5 - The most popular videos areaclick away
Providing Support for Cyclone Victims in Myanmar
Google Cares as well as Microsoft
At Microsoft, we are saddened by the devastation caused by the cyclone in Myanmar, and our hearts go out to the many people impacted by this tragedy. We have encouraged employees who wish to donate to give through our partner international humanitarian relief organizations, such as CARE, World Vision, The American Red Cross or Save the Children. Donations will be matched by Microsoft for United States based eligible employees.
In addition, we are partnering with NetHope –anonprofit IT consortium of leading international NGOs – to provide technology resources and support as needed.
In past disaster situations, we have provided various technology solutions to help humanitarian organizations respond, including: development ofatracking system for displaced people; updated online maps of the impacted regions;avolunteer registration tool;asatellite communications infrastructure for non-governmental organizations; andasoftware application localized to meet language needs. We are actively working with numerous humanitarian relief organizations to determine where our resources can be most helpful for the impacted region.
Google Map ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Popular Search Results မှာ UNOSAT Myanmar (Burma) Cyclone Map ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ အဝေးတစ်နေရာက ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ လှုဒါန်းမှုတွေ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးနိုင်သလောက် လုပ်နေကြပါတယ်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသက ပြည်သူအားလုံး လိုအပ်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ အချိန်မီရရှိပြီး အမြန်ဆုံး အခြေတကျ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
Google Maps ကို http://www.google.com/maps ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Firefox မှာ Ctrl+L or Alt+D နဲ့ Address Bar Location ကို သွားပြီး Google/Maps လို့ရိုက်ပြီး Ctrl+Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ Google Map ကို တိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်။
Running Stuffs in My PC
ရေးချင်တာများ လုပ်ချင်တာများပြီး ဘာမှမရေးဖြစ်တာ ကြာပြီ။ လုပ်ချင်တာတွေလည်း မပြီးသေး။ စာတမ်းကိစ္စ လုပ်စရာတွေနဲ့ MS Word နဲ့ပဲ နပန်းလုံးနေရ။ စာဖတ်နေရပါတယ်။ ဖိုးချမ်းရေးထားတာဖတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ OS n Soft တွေ အကြောင်း Share တဲ့ သဘော ရေးဦးမယ် စိတ်ကူးရလာတယ်။ စိတ်ကူးအတိုင်း အကောင်ထည် ဖော်လိုက်ပါတယ်။
Windows Vista 32-bit OS ( Ultimate ) as my main operating system
Ubuntu 7.10 Gusty Gibbon to tamper s/t
2007 ကိုသုံးပါတယ်။ Pirate Version ပါပဲ။ ဝယ်မသုံးနိုင်ပါဘူး။ Office XP, 2003 သုံးလာပြီး 2007 ကို စသုံးခါစမှာ မျက်စိနောက်လောက်အောင် ရှာဖွေမွှေနှောက်ရပါတယ်။ အခုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ GUI တွေလည်း သဘောကျပါတယ်။ ပန်းသီးမှာတော့ ဒီထက်ပိုလှ ပိုကြွတဲ့ interface တွေနဲ့ ထုတ်လိုက်တယ် ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ပန်းသီး မသုံးဖူးပါဘူး။ အခြေအနေပေးရင် MacBookPro လေးဖြစ်ဖြစ် သုံးခွင့်ရချင်ပါတယ်။ Steve Jobs ကိုလည်း အားပေးချင်ပါတယ်။
7.0 ထွက်ခါစမှာ စမ်းသုံးဖူးပေမယ့် ကီးတွေက Blacklist ခဏခဏ ပြတာနဲ့ အရင် 6.0 အဟောင်းလေးကိုပဲ ဖုန်သုတ်ပြီး ပြန်သုံးနေတယ်။ Antivirus မှာ Free Version လည်း ရတဲ့ Antivir Classic ကိုတော့ သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ Key အတွက် ဘာမှ ဒုက္ခများမနေတော့ဘူး။ သုံးရတာလည်း ပေါ့ပါးပြီး Security လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အဆင်မပြေတာက…Virus Scan ဖတ်ရင် သူ့ချည်းပဲ လွှတ်ထားလို့ မရတာပဲ။ တစ်ခုခု Alert တက်လာလို့ Action မယူမချင်း ဆက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပေခံနေတာ။ အဲဒါနဲ့ Kaspersky ကိုပဲ ပြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ (XP သုံးတုန်းက Antivir နဲ့ Sygate Personal Firewall ကို တွဲသုံးပါတယ်။ Windows XP Firewall မသုံးဘူး။ အခု Vista မှာတော့ Firewall နဲ့ Defender Security ကိုပဲ အားကိုးထားတယ်။)
Windows Media Player 11(already built-in Vista)
Jet Audio 7.0 (mostly used for Video watching)
Real Player 11 Basic (just for downloading some video files which cannot be downloaded by download managers)
VLC Player (ဘာနဲ့မှ ဖွင့်လို့မရတဲ့ media files တွေကို VLC နဲ့ ကိုင်တယ်)
iTunes 7.6.1 (for downloading podcasts) (very admirable invention …. Hee hee … I already have downloaded more than 30 Gbs podcasts from iTunes Store) Thx Apple :D
µTorrent (Mininova and YouTorrent are my friends :D)
Pidgin (ubuntu မှာ Built-in ပါတာကို စတွေ့ပြီး သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Multiple account loggin in feature ရယ်။ Gtalk လိုမျိူး message box တွေ သိပ်မရှုပ်တာကြောင့်ရယ်။ ပိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။)
MWSnap version 3.0.0.74 ကို သုံးတယ်။ အခမဲ့ဆော့ဝဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ Vista မှာပါတဲ့ Snipping Tool ကို သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။
Abbyy Lingvo 12 Multiple languages
Media file type converter
Total Video Converter ကိုသုံးပါတယ်။ freeware တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Video Converter ဆိုပေမယ့် Audio Files တွေ ကိုလည်း ကြိုက်ရာ format ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အီးဘွတ်တွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်ဖို့ကတော့ Foxit Reader က အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အခမဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပြီးတော့ သုံးရတာ တအားသွက်တယ်။ PDF Editing နဲ့ Virtual Printing လုပ်ဖို့ ကတော့ Acrobat Professional သုံးပါတယ်။ PDF Creator ကို XP မှာတုန်းက သုံးတယ်။ Vista ကို support မလုပ်ပါဘူး။
ကျွန်တော့်ဆီက တချို့ PDB format နဲ့ စာအုပ်တွေ အတွက်က Isilo Reader သုံးပါတယ်။
xampp နဲ့ local WP တစ်ခုလုပ်ထားတယ်။ php, MySQL ကလိဖို့ထည့်ထားတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ …. မီးမြေခွေးပေါ့ခင်ဗျာ။
Slimbrowser ဆိုတဲ့ IE based browser ကိုလည်း သုံးတယ်။ Web Page တွေကို သိမ်းချင်ရင် web page archive, mht file format နဲ့ တစ်ဖိုင်ထဲမှာ သိမ်းလို့ရလို့။ html ဖိုင်ကတစ်ဖိုင်၊ picture ဖိုင်က တစ်ဖိုင် သိမ်းစရာ မလိုတော့ဘူး။
စာဖတ်ရ၊ ဘလော့ဂ်လည်ရ၊ ဘလော့ဂ်ရေးရ၊ ချက်တက်ရနဲ့ ဂိမ်းမဆော့နိုင်ပါ။ :D
Video Collection Widget for Blog
If you sometimes write posts on your blog that includes videos,you can collect your video posts in one place by usingavideo collection widget called Vodpod.
Go to http://vodpod.com and getafree account.
Once you have created an account, VodPod tells you to install VodPod button at your browser toolbar or to add its bookmarklet (Save to VodPod).You may ignore it, but it isavery powerful tool to easily collect videos into your VodPod video llist.
You can now import your videos by one of these options.
1. direct clicking the browser button to addavideo
2. entering web address or embed tag
3. inserting your blog address (a new tool called blog importer....videos@your blog will be automatically imported to VodPod)
4. uploading from your computer or via ftp
You have imported some vids and now customize your widget style and get your widget for your blog.
For those who are not familiar with RSS Feeds and Readers
Presented by www.commoncraft.com
More @ Leelefever's Explanations in plain English
Gmail Invisible Mode (another yahoo?)
Gmail Chat addedanew feature , invisible mode. Gmail users can stay online in an offline status. This feature can only be available in Gmail chat , not yet in Desktop application such as Gtalk. If you are simutaneously using both Gmail chat and Gtalk program, enabling invisible mode cannot be completed because that desktop software does not support invisibility.
This might be , for some people , most wanted gmail feature. Not all ppl will not like that feature. To me , chatting me in Idle mode irritates me much. But this is user's option and his or her choice. I may be in idle mode or invisible mode but if someone chats me , I will reply in available or busy mode with respect to him or her.
Credit goes to Barnyar for this info.
This is my so-called true brain, the emotions that run my life! (?)
Bloggags.com မှာတွေ့တဲ့ ကာတွန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကာတွန်းတွေကို သဘောကျတယ်။ အဲဒီဆိုဒ်က အသစ်ထပ်တင်တာမတွေ့ဘူး။ ၂၀၀၇ မှာထဲက ရပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါ တင်ဖူးတဲ့ပို့စ်က Weblogcartoons.com မှာလည်း အသစ်တွေ ထပ်မတွေ့ရဘူး။ အခုကာတွန်းတွေကိုလည်း သဘောကျတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
File format ပြောင်းပေးတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကို Digital Inspiration မှာတွေ့လို့ ဘလော့ဂ်မှာ တွဲမှတ်ထားလိုက်တယ်။
1. mp3@koolwire.com - Convert WAV to MP3 format (file limit: 10 MB)
2. iPhone@pdfonline.com - Convert Microsoft Visio (VSD) and Word 2007 (DOCX) to PDF. You can send multiple file formats in the same email and the converted PDF documents will arrive in separate emails. Don't get confused by the iphone word in the email address, it works just fine for the desktop and other wireless devices.
3. pdf@koolwire.com - Convert DOC, XLS or PPT files to PDF
4. doc@koolwire.com - Convert PDF to Word or RTF
5. wav@koolwire.com - Convert MP3 Songs to WAV files
ဖိုင်တွေကို format ပြောင်းဖို့ ကွန်ပျူတာမှာ ဆော့ဝဲရှိရင် ဆော့ဝဲနဲ့ပြောင်းတာပဲ ပိုကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်။ အသုံးချပရိုဂရမ် ထည့်မထားတဲ့ စက်မှာတော့ အခုလိုမျိူး အီးမေးလ်ကတဆင့် ပြောင်းပြီးသားဖိုင်ကို စောင့်ရမှာပေါ့။ အခုလို အီးမေးလ်တွေကိုပို့ပြီး ဖိုင်ပြောင်းတာတော့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးပါဘူး။ Online File Conversion တွေတော့ လုပ်ဖူးပါတယ်။ Document တွေနဲ့ Media File Types တွေ ပြောင်းဖို့ လိုလာရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဝက်ဆိုဒ်တွေကို သုံးတယ်။
more info @Digital Inspiration
ကြိုးပျက်နေသော ဂစ်တာဆီမှ တေးသွားတစ်ပုဒ်
ကျေးငှက်တွေက အတောင်ပံတွေကို တမ်းတ
ပန်းပွင့်တွေက ရနံ့တွေကို သတိရ
စမ်းချောင်းတွေက စီးဆင်းခွင့်တွေကို မျှော်လင့်ကြရင်း
မိုးစက်တွေ စဲမယ့် တစ်နေ့
ကိုမျက်လုံး ဘလော့ဂ်မှာ ဒီကဗျာကို စပြီးဖတ်ဖူးပါတယ်။ freenpl မှာ ထပ်ပြီးဖတ်ရတယ်။
~ မိုးသားမည်းမည်းတွေ ကင်းရှင်းသွားတဲ့ တစ်နေ့တော့ လှပလွန်းတဲ့ ကောင်းကင်ပြာ ~~~
xkcd on Bored wtih the Internet
xkcd - A Webcomic of romance, sarcasm, math and language.
Check link here.
Be Idle. Be Available. It's Your Choice
Gtalk Idle Maker
Program Download for gTalk users.
သုံးနေကြတာလည်း ကြာပါပြီ။ လိုတဲ့လူတွေဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ ရအောင် ဘလော့ဂ်မှာ သိမ်းထားလိုက်တယ်။
ခေါင်းစဉ်က SE War လို့သာ တင်လိုက်တယ်။ အများကြီး ကျယ်ပြန့်သွားပြီ။ တကယ်တမ်းပြောချင်တာက အခုမှသိတဲ့ SE အသစ်တစ်ခု အကြောင်းပြောချင်ရုံသက်သက်ပါ။ ATNIO ( founded in Feb 2007) ... တခြား SE search results တွေပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတယ်။ SE အားလုံးကို မွှေရှာပြီး Results ထုတ်ပေးပါတယ်။ Google နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရှာကြည့်ရင် ရှာဖွေချိန် နည်းနည်းလေးပိုပေးရတယ်။ Results တွေကို ပိုထုတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို စာမျက်နှာ ၃ ၄ မျက်နှာထက်ဘယ်သူက ပိုကြည့်မှာလဲ။ :) သူ့ဖာသာ ဘယ်နှမျက်နှာ ဘယ်လောက်အရေအတွက် ရှာပေးပေး။ ဟုတ်ဘူးလား။ နောက်တစ်ခုက Preferences အပိုင်း Family Filter ... On ထားလို့ရတာ။ ပြန်ဖွင့်လို့ ရတာပဲ။ Advanced Search ကိုလည်း Google လောက်မကြိုက်ပါဘူး။ My Folder ဆိုတဲ့ Search History သိမ်းထားစရာ တစ်ခု ပါတယ်။ History Enabled လုပ်ထားလို့ရတာ သူတစ်ခုထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဟာမှ Perfect မဖြစ်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
SE တွေအကြောင်းပြောလို့ Search Results တွေကို လူတွေသိပ်ပြီး Rely မလုပ်တော့တဲ့ အကြောင်း ရေးထားတဲ့ "Search Atheism on the Rise" ဆိုတဲ့ စကားလုံး(ဘယ်မှာဖတ်ဖူးလဲ မမှတ်မိတော့ပါ) အဲဒါကို သတိရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဓိက သုံးဖြစ်တဲ့ SE တွေကတော့ Google နဲ့ Searchmash ပါပဲ။ အစွဲပဲ ပြောရမလားပဲ။ :D
Info via JohnChow (shared item of CMSMdy)
MyBlogLog က အရင်တစ်ခါက Yahoo ID နဲ့ ဝင်ခိုင်းပြီး အခုတော့ old-fashioned email နဲ့ ပြန်ဝင်နိုင်တော့မယ်တဲ့။ ပြောင်းလဲဆန်းသစ်မှုတွေ အများကြီးလုပ်ထားပါတယ်တဲ့။ အပေါင်းအပါတွေလည်း အများကြီး ခေါ်ထည့်လာတယ်။ MyBlogLog က ပို့လာတဲ့ မေးလ်ကို ဘလော့ဂ်မှာ တွဲပြီး Quote ထားလိုက်တယ်။
Inacouple weeks, we'll be launchinganew feature called New with
Me. This feature will use the URLs on the Services tab of your
MyBlogLog profile to aggregate your latest activity on sites such as
Twitter, Last.fm, Digg, and YouTube. Asaresult, your profile page
will look different - publicly available updates from the services
you have listed will be merged with your existing information. Your
latest Flickr photos, Last.fm tracks, and YouTube videos, will all be
in one place. Updates from your contacts on MyBlogLog will be merged
and available as well. Simply put, the New with Me feature will
transform your static profile intoadynamic one.
Your MyBlogLog profile, About Me widget, and Email Signature were the
first steps in distributing your Web identity. New with Me is the
next, pulling togetheraunified picture of who you are on the
distributed social Web. We have lots of cool things planned for this
feature -- I hope you'll use it to help build the next generation of
Blogging as fun?
Blogging asapleasure?
Blogging for the sake of earning money?
Blogging for sharing thoughts, views and knowledge?
And you? why are you blogging? Hmmmmmm !!!!!!
Scheduled Posts in Blogger
Blogger New Feature by Blogger Draft
ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်တွေကို ကြိုပြီးတင်ထားလို့ ရပါပြီ။ Blogger Draft မှာ ရေးထားပါတယ်။ တင်ချင်သောပို့စ်ကို Publish လုပ်ပြီး ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်ကို တက်စေချင်သော နေ့ရက် အချိန်ကို ကြိုပြီး ပေးထားလို့ရပါတယ်။ Blogger Text Editor ကို ဝင်ပါ။ ဝင်ပြီးတော့ Post Option မှာ နေ့ရက် အချိန်ကို မိမိပို့စ်ကို Publish လုပ်လိုသော နေ့ရက်၊ အချိန်ကို ပြောင်းထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Publish လုပ်လိုက်ပါ။ Edit Posts တွေမှာ Scheduled ဆိုပြီး ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော သတ်မှတ်ထားသော အချိန်မှာ ပို့စ်ကို ဘလော့ဂ်မှာ မြင်နိုင်ပါပြီ။
Additional Notes from Blogger Draft
We know that some bloggers currently use future post dates in order to keep one post at the top of their blog forawhile. Though we recommend that you useaText page element for this, you can still get this old behavior with just one additional step. First, publish your post with the current date and time. This will publish it to your blog. Then, once it's published, edit the post to change the date to the future and publish it again. We don't re-schedule posts that are already published, so the post will stay on your blog but sort to the very top.
As with published posts, the post editor does not autosave scheduled posts if you go back and edit them. You wouldn't want the post to publish while you're in the middle of editing it! You can save the scheduled post asadraft to remove the scheduling and this will turn autosave back on.
In some testing we've found that schedule posting is not working for some FTP blogs. If you run across this, please let us know in the comments so we can try to track it down.
:) I have scheduled this post last night.
အရင်တုန်းက အွန်လိုင်း Chat အတွေ့အကြုံတွေအကြောင်း သီချင်းတွေကို နားထောင်ဖူးကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ Chat သမားဘဝ ပြီးတော့ အခု ဘလော့ဂ်သမား ဘဝ လာတော့မယ်။ မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါများရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်း သီချင်းများတဲ့။ သီချင်းဖန်တီးသူတွေကလည်း မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါတွေပဲ။ အမ်တီဗွီရိုက်ရန် လူစုလျက်ရှိ။ ဖြန့်ချီမည့် အယ်လ်ဘမ်တွင် တစ်ပုဒ်အပါအဝင်ဖြစ်သော "ဒို့ရပ်ဝန်း"သီချင်းအတွက် 14.2.2008 တွင် ဘလော့ဂ်ဂါများကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အမ်တီဗွီရိုက်ပြီး။ သီချင်းများအတွက် တီဝိုင်းကိစ္စ၊ တေးသံသွင်းကိစ္စများ အဆင်ပြေပြီးလျှင် အခွေထွက်လာမည်ဟု သတင်းရရှိ။ သတင်းအစုံအလင်မှာ ....... :D
Design Created by MyKha
Picture via Barnyars
သူ ဆိုတာ ... ကျား
သူမ ဆိုတာ ... မ
ကျားနဲ့မ တွေးမြင်ပုံမတူဘူး ...
ဒါကို "သူ/သူမ" ကာတွန်းရေးတယ်။
Pdf File Download via Mediafire
Credit to Ma Nay Naing
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://khunmoung.myanmarbloggers.org/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.